စာသင်ခန်း တစ်ခု၌ ဆရာမက တပည့်များအား ပါဠိဘာသာစကား ဘာသာရပ် သင်ကြား ပို့ချလျက် ရှိ၏။
"ပါဠိ ဘာသာ စကားမှာ အသုံးများတဲ့ စကားလုံး နှစ်လုံးဖြစ်တယ်။ တစ်လုံးက "တွံ" ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်လုံးက "မေ" ဆိုတာ ဖြစ်တယ်။ "တွံ" ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လို ပြောမယ်ဆိုရင် You ဖြစ်ပြီးတော့ "သင်" လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ "မေ" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကတော့ အင်္ဂလိပ်လို ဆိုရင်Me ဖြစ်ပြီး "ငါ့အား" လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ ဘုရား ရှိခိုးတွေမှာ အများဆုံး တွဲပြီး ပါဝင်တတ်ပြီး မြန်မာလို အဓိပ္ပာယ် အလွယ် ကောက်လို့ ရအောင် "တွံ သင်သည်… မေ ငါ့အား…." ဆိုပြီး ဆက်တိုက် ဘာသာ ပြန်တတ်ကြတယ်။ "
ထိုစဉ် အခန်းနောက်နားမှ ကျောင်းသား ၂ ဦး စာသင်ရာတွင် စိတ်မ၀င်စားဘဲ တိုးတိုး တိုးတိုးနှင့် စကား ပြောနေသည်ကို ဆရာမ တွေ့သွားသဖြင့် လှမ်းမေးလိုက်သည်။
"ကဲ နောက်က ကျောင်းသား ၂ ယောက် မတ်တပ်ရပ်ပါ။ ဆရာမ ခုနက ဘာပြောသွားလည်း ပြန်ပြောပြပါ။ "
ဆရာမ၏ အမေးအား ဖြေလိုက်သော ကျောင်းသား၏ အဖြေကြောင့် တခန်းလုံး သောကနဲ ရယ်ကြ၍ ဆရာမလည်း လွန်စွာမှ ဒေါသ ထွက်သွားသော ဟူ၏။ ထို ကျောင်းသား၏ အဖြေစကားမှာ
"သင် တွံ သည်၊ မေ ငါ့အား… လို့ ပြောပါတယ် ဆရာမ" ဟူ၏။
တက္ကသိုလ် စာသင်ခန်း တစ်ခုတွင် ဖြစ်၏။ အခန်းပြင်ပမှ ဧည့်သည်တစ်ဦး လာရောက် တွေ့ဆုံရာ သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသူ ထွက်ကာ တွေ့ဆုံ၏။ ထွက်ရာတွင် အလျင်စလို အပြေးအလွှား ထွက်ရာ ရေစိုနေသော ကော်ရစ်ဒါ အရောက် စီးထားသော ဖိနပ်ချော်ကာ ကြမ်းပြင်တွင် ဗိုင်းကနဲ ဖင်ထိုင်လျက် ကျ၏။ အမှတ်မထင် အဖြစ်အပျက်ကြောင့် အခန်းတွင်း စာသင်နေသော ကျောင်းသားများလည်း မတိုင်ပင်ပါဘဲ ၀ါးကနဲ ရယ်မိကြ၏။ သို့ရာတွင် ရှက်သွားသော ကျောင်းသူကို လှမ်းကြည့်ပြီး ဆရာမမှ အခန်းတွင်းရှိ ကျောင်းသားများကို လှမ်းဟန့်၏။
"ဟဲ့ ကျောင်းသားတွေ မင်းတို့တွေ သူတပါး ဒုက္ခရောက်တာ ကူမယ်မကြံဘူး ထရယ်ကြတယ်။ မင်းတို့တွေ လူမှုရေး နားမလည်ကြဘူးလားကွ"
ထိုစဉ် နောက်ခုံတန်းတွင် ထိုင်သော ကျောင်းသား တစ်ယောက်မှ ခပ်တိုးတိုး ပြောလိုက်သော စကားကြောင့် ဆူမည် ကြံသော ဆရာမပင် ဆက်ဆူရန် မေ့ပြီး ပြုံးသွားရသော ဟူ၏။
"ဆရာမကလည်း ဒီလူမှုရေး နားမလည်တာပဲ လာပြောနေတယ်။ နားမလည်လို့ အမှတ် ၄၀ အတိနဲ့ အောင်လို့ ရိုးရိုး တက္ကသိုလ် ရောက်တာပေါ့။ လူမှုရေးသာ အမှတ်များရင် အင်ဂျင်နီယာ၊ ဆရာဝန် တက္ကသိုလ်တွေ ရောက်မှာပေါ့။"
Your website is very cool. I'm impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you
Feel free to visit my web blog - dailynest.com
information written in such an ideal way? I'veaproject that I'm just
Feel free to surf to my web page macrogadgets.com
Feel free to surf to my homepage ... http://www.hiarabs.com/
Feel free to surf to my homepage - urnet.co
Also visit my web site :: http://www.szakibazis.com/blogs/entry/Travel-To-Spain-2013-05-04